मेसेन्जर प्रयोग गर्नुहोस् तपाईको कम्प्युटरमा MSN वेब मेसेन्जरको साथ केहि पनि स्थापना नगरी
वेब मेसेन्जर एमएसएनले तपाईंलाई कुनै प्रोग्राम स्थापना नगरी मेसेन्जर प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको पीसीमा केहि पनि स्थापना नगरी कसरी मेसेनर प्रयोग गर्ने बारे चरण ट्यूटोरियल चरण।
फिसि। फिसि What के हो, यसलाई कसरी हटाउने र पिसि before अघि बैंक र बचत बैंकहरूको जिम्मेवारी के हो
फिसि,, फिसि or वा पाइजिंगले फरक पार्दैन यदि यो सहि वा गलत तरिकाले हिज्जे गरिएको छ भने कुनै पनि केसमा तीन शब्दहरू उही समस्याको बारेमा बढी सिक्न प्रयोग गरिन्छ, अनलाईन बैंकि toमा पहुँच कोडहरूको चोरी।
मेरो पहिलो मेमे किन म मेरो ब्लग लेख्छु। र मेमे भनेको के हो?
मेमे भनेको के हो? मेरो पहिलो मेमेको फाइदा उठाउँदै म भन्दछु मलाई मेमे जस्तो लाग्छ, होशियार! जुन मेमको औपचारिक परिभाषा होईन, यो विकिपीडियाको लागि हो।
कसरी आरएसएस फिडको सदस्यता लिने र आरएसएस फिड के हो
आरएसएस फिडको सदस्यताले तपाईंलाई वेबसाइटमा के प्रकाशित हुन्छ भनेर जानकारी गराउन अनुमति दिन्छ। यस चरण-देखि-चरण म्यानुअलको साथ फिडहरू प्रयोग गर्न सिक्नुहोस्।
LAST.FM. कसरी LSTFM प्रयोग गरेर नयाँ संगीत पत्ता लगाउन खाता सिर्जना गर्ने
अन्तिम.एफएम संगीत अनलाइन खोज्नको लागि नयाँ तरिका हो। यस चरण-द्वारा-म्यानुअल को मद्दतको साथ Last.fm मा एक नि: शुल्क खाता बनाएर नयाँ समूह र कलाकारहरू भेट्नुहोस्।
मेसेन्जर अपडेट बेवास्ता गर्नुहोस् वा अघिल्लो संस्करणमा फिर्ता जानुहोस्
के तपाइँ तपाइँको मेसेन्जर अपडेट गर्नबाट बच्न चाहानुहुन्छ? के तपाइँ मेसेन्जरको पछिल्लो संस्करणमा फिर्ता जान चाहानुहुन्छ? तपाइँको एमएसएन संस्करण प्रयोग गर्न जारी राख्न, यो म्यानुअल चरण-चरण पढ्नुहोस्।
कसरी तपाइँको mp3s समान आवाजको साथ राख्न र गीत र गीतको बिचमा भोल्युम वृद्धिबाट बच्न
के तपाईको mp3s एक अलग आवाज मा प्रत्येक ध्वनि छ? तपाईं कसरी एकै आवाज मा आफ्नो सबै गीतहरु राख्न सक्नुहुन्छ? यो म्यानुअल पढ्नुहोस् र तपाइँ तपाइँ आफ्नो mp3s को अडियो सजीलै कसरी सामान्य बनाउन सक्नुहुनेछ।
,50.000०,००० पृष्ठ दृश्य। अर्को स्टेशन २,००० दैनिक आगन्तुकहरू
50.000०,००० भन्दा बढी पृष्ठहरू धन्यबाद तपाईलाई धन्यबाद। एक अमिलो अभिवादन।
MP3Gain। MP3Gain को स्थापना पुस्तिका र स्पेनिश अनुवाद
MP3Gain ले तपाइँलाई तपाइँका सबै MP3 हरूको भोल्युममा मोड गर्न दिन्छ ताकि तपाइँ गीतहरू बीच बहिरो हुनुहुन्न। भोल्युममा यी जम्पहरू कसरी जोगिने भनेर जान्नको लागि एमपी। गाइन म्यानुअल पढ्नुहोस्।
X 44 XBox 360 360० को लागि सस्ता। कसरी MSN र बडिसँगै नि: शुल्क Xbox win XNUMX० जित्ने
Xbox Give 360 ​​Give सस्ता। MSN.es च्यानलहरूमा निःशुल्कका लागि भाग लिनुहोस् र पखवाढ्दो प्रतिस्पर्धा ड्रमा प्रवेश गरेर एक XBox360 जित्नुहोस्।
फाईल विस्तारहरू। तिनीहरू के हुन् र कसरी लुकेका एक्सटेन्सनहरू हेर्नुहोस्
एक्स्टेन्शन टेसले तपाईंलाई थाहा दिन्छ कि कुन फाईलसँग सम्बन्धित छ, तर विस्तारहरू विन्डोजमा पूर्वनिर्धारित रूपमा लुकेका छन्। यदि तपाईं कसरी एक्सटेन्सनहरू हेर्न जान्न चाहानुहुन्छ भने, यो म्यानुअल पी पढिरहनुहोस्
कहीं पनि एफएम। कसरी कहीं पनि एक खाता बनाउने। एफएम मा कहीं पनि तपाइँको संगीत सुन्न को लागी
जहाँसुकै एफएमले तपाईंलाई कहिँबाट पनि मनपर्ने संगीत सुन्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको Anybody.fm खाता सिर्जना गर्न कत्ति सजिलो छ हेर्नुहोस् र यो चरण-देखि-चरण म्यानुअलको साथ गीतहरू अपलोड गर्न सुरू गर्नुहोस्।
IZArc कम्प्रेसर-डिकम्प्रेसर। IZArc नि: शुल्क बहु-ढाँचा कम्प्रेसर कसरी स्थापना गर्ने र WinRar को बारे बिर्सनुहोस्
IZArc एक नि: शुल्क कम्प्रेसर स्प्यानिशमा उपलब्ध छ (र 40० भन्दा बढी भाषाहरू) जुन WinRAR वा WinZip लाई निःशुल्क विकल्प प्रदान गर्दछ। यस पुस्तिकाको साथ तपाईं देख्नुहुनेछ IZArk सजिलैसँग कसरी स्थापना गर्ने र चरण-देखि-चरण।
म नयाँ Windows Live हटमेलबाट पुरानो एमएसएन हटमेलमा कसरी जान सक्छु? पछिल्लो संस्करणमा फर्कन सक्नुहुन्न?
के म हटमेलको अघिल्लो संस्करणमा जान सक्छु? यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यदि तपाइँ क्लासिक एमएसएन हटमेलको पुरानो संस्करणमा फर्कन सक्नुहुन्छ, तपाइँले जान्नुपर्दछ कि विन्डोज लाइभ हटमेलबाट फिर्ता हुन सम्भव छैन।
यदि तपाईं होशियारी नगरी जीवनको माध्यम बाट जानु भयो भने तपाईंले नतिजा भुक्तानी गर्नुहुनेछ। इन्टरनेटले समान कानूनको पालना गर्दछ र त्यसैले तपाईं इन्टरनेटमा आफ्नो गतिविधि संग सावधान हुनु पर्छ। पढ्न जारी राख्नुहोस् ....
लुकेका फाइलहरू कसरी हेर्ने। तपाईको कम्प्युटरमा लुकेका फाइलहरू देख्न धेरै नै सरल छ, केवल यो मिनी चरण-देखि-चरण म्यानुअल अनुसरण गर्नुहोस् र तपाइँ आफ्नो पीसीमा लुकेका फाइलहरू कसरी हेर्ने हेर्नुहुनेछ।
जस्तै, लाभ, ठाउँ, डिस्क, हार्ड, निःशुल्क, आकार, हराइरहेको, विस्तार, वृद्धि, डिस्क, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, म्यानुअल, ट्यूटोरियल, सिरका
कसरी Gmail सिर्जना गर्ने। जिमेलले आमन्त्रितको स्वतन्त्र ईमेलको प्रस्ताव गर्दछ। यस म्यानुअलमा तपाइँ कसरी खाता सिर्जना गर्ने, तपाइँलाई के चाहिन्छ, के यसले प्रस्ताव गर्छ, आदि देख्नुहुनेछ। यदि तपाईं जीमेल ईमेलको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने पढिरहनुहोस्।
हटमेल अ default्ग्रेजीमा पूर्वनिर्धारित रूपमा आउँदछ, यदि तपाईं यसलाई स्पेनीमा कसरी राख्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने विन्डोज लाइभ हटमेलको भाषा कसरी स्पेनीमा बदल्ने भन्ने बारे यो म्यानुअल पढ्न नहिचकिचाउनुहोस्।
एआईएमपी क्लासिक। स्थापना पुस्तिका र पहिलो कन्फिगरेसन
AIMP Classic सबै भन्दा राम्रो खेलाडी हो जुन मैले कहिल्यै प्रयास गरेको छैन। AIMP क्लासिक कसरी स्थापना गर्ने र कन्फिगर गर्ने जान्नुहोस् चरण-दर-चरण Vinagre Asesino म्यानुअलको साथ।
YouTube लाई रोक्नुहोस्। YouTube मा भिडियो प्ले कसरी रोक्न सकिन्छ
तपाईंको YouTube भिडियोको छेउमा स्टप बटन राख्नुहोस् तिनीहरूलाई लोड गर्न रोक्नको लागि। ग्रिसेमोनकीले तपाईंलाई सजीलै गर्न अनुमति दिन्छ ...
दक्षिण पार्क स्टूडियो। कसरी तपाईंको आफ्नै दक्षिण पार्क अवतार सिर्जना गर्ने
तपाईको साउथ पार्क अवतार निःशुल्क बनाउनुहोस् र केहि पनि स्थापना बिना नै। यदि तपाईं साउथ पार्क श्रृ series्खलाबाट आफ्नो पुतली पाउन चाहनुहुन्छ भने, यो म्यानुअल पढ्न जारी राख्नुहोस् ...
प्रोमेटेस (स्पेनिशमा) दिन गुगलले हामी सबैलाई नियन्त्रण गर्नेछ
प्रोमिटेस: के गुगलले हामीलाई कहिले नियन्त्रण गर्नेछ? यो धेरै चाखलाग्दो भिडियोमा तपाईं भविष्यवाणीमा गुगलले यसको प्रोमेटेस प्रोग्राम मार्फत सबै कुरा कसरी हावी गर्ने छ भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यो नछुटाउ। रीको
सिम्पसन फिल्म कसरी तपाईंको आफ्नै सिम्पसन अवतार सिर्जना गर्ने
सिम्पसनको आफ्नै अवतार सिर्जना गर्नुहोस्। यस भिडियो ट्यूटोरियलमा तपाईंले देख्नुहुनेछ कसरी सिम्प्सन फिल्म को एक निजीकृत अवतार सजीलै बनाईएको छ र एक पछि अर्को चरणमा।
विन्डोज लाइभ मेसेन्जर कसरी स्थापना गर्ने
नयाँ विन्डोज लाइभ मेसेन्जरले धेरै सजीलो स्थापना गर्दछ र यो म्यानुअलको साथ तपाईंसँग यो अझ सजिलो हुनेछ। मेसेन्जरमा कसरी स्थापना गर्ने र लग इन गर्ने सिक्नुहोस्
अल्लाप्ले खेलौं। समुद्र तटमा ?. कुनै alaplaya
alaplaya तपाइँलाई स्पेनिश मा तीन मजा नि: शुल्क अनलाइन खेल प्रदान गर्दछ। यसको अनुहार बाट मल्टिप्लेयरको मजा लिनुहोस्।
इम्युलले क्रेडिटहरू कहाँ राख्छ?
के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि इमेलेले तपाईंको क्रेडिटहरू बचत गर्दछ जहाँ ढाँचा पछि तिनीहरूलाई हराउन छैन? पढ्न जारी राख्नुहोस् म सबै कुरा चरण-चरणमा भन्छु।
Sqirlz मोर्फ पुस्तिका। कसरी आफ्नो अनुहार मोफ गर्ने।
सिक्नुहोस् कसरी Sqirlz मोर्फ प्रयोग गर्ने अनुहारहरूको बीचमा रूपान्तरण गर्नका लागि। यो भिडियो ट्यूटोरियल प्रयोग गर्नुहोस्, जसले स्किर्लज मोर्फलाई निःशुल्क मोर्फि thanks धन्यवादको लागि चरण-देखि-चरण म्यानुअल समावेश गर्दछ।
आवासीय कार्यक्रमहरू। तिनीहरू के हुन्, तिनीहरू के हुन् र कसरी मेमोरी रेसिडेन्ट प्रोग्रामहरू असक्षम गर्ने।
मेमोरी निवासी कार्यक्रमहरू एक आशिष् र एक टाउको दुखाइ हो। यस चरण-दर-चरण म्यानुअलको साथ निवासी प्रोग्रामहरूको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
मेसेन्जरका बारे सबै कुरा जान्नुहोस्
मेसेन्जर सबै एमएसएन मेसेन्जर, नयाँ विन्डोज लाइभ मेसेन्जरका लागि प्रतिस्थापनको बारेमा मेसेन्जरको नयाँ संस्करणका लागि यी ट्यूटोरियलको साथ यसलाई कसरी स्थापना गर्ने, कन्फिगर गर्ने र प्रयोग गर्ने सिक्नुहोस्।
कसरी तपाइँको लेख न्यूनीम पृष्ठहरू जस्तै Meneame, Enchilame, Fresqui, टेक्नोराटी, आदि संग लि link्क गर्ने।
यदि तपाईंलाई लेखहरू मुख्य समाचार पृष्ठहरूमा कसरी लि link्क गर्ने बारे थाहा छैन भने, यो मिनी म्यानुअल पढ्नुहोस् जसमा तपाईं कसरी ब्लगलाई Meneame, Fresqui, आदिसँग लि to्क गर्ने सिक्नुहुनेछ। ...
हट सेयर। कसरी सीमित बिना मल्टिमेडिया फाइलहरू साझेदारी गर्ने।
हट सेयर एक नयाँ नि: शुल्क मल्टिमेडिया भण्डारण हो जुन डाउनलोडको कुनै सीमा छैन। तपाईं जति तातो सेयर गर्न चाहानुहुन्छ अपलोड गर्नुहोस्! यस पुस्तिकाको साथ कसरी सिक्नुहोस्।
अनलाइन कन्भर्टरहरू। कुनै प्रोग्राम स्थापना नगरी कसरी एउटा ढाँचाबाट अर्कोमा रूपान्तरण गर्ने
तपाईंको कम्प्युटरमा कुनै प्रकारको प्रोग्राम स्थापना नगरीकन एक ढाँचाबाट अर्कोमा रूपान्तरण गर्न अनलाईन कन्भर्टरहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यी सबै भन्दा राम्रो हुन् ...
गुगल अलर्टहरू। तपाइँको रुचि के बारे सूचित रहन कसरी
गुगल अलर्टले तपाईंलाई कुनै पनि विषयको बारेमा सुचित रहन अनुमति दिन्छ जुन तपाईंलाई रूचि छ, मैले गरेको ट्यूटोरियल पढ्नुहोस्, गुगल अलर्टहरूको साथ कसरी आफ्नै अलर्टहरू सिर्जना गर्ने भन्ने जान्नको लागि।
नीरो 7. मा रेकर्डि speed गति कसरी समायोजित गर्ने। हाम्रो रेकर्डि। सुधार गर्दै
नेरो With को साथ यो रेकर्डि speed गति देख्न सजिलो थियो, नयाँ नीरो it मा यो लुकेको छ, तर यति धेरै छैन, भिनाग्रे एसेसिनो ब्लगबाट यो सानो टिप्स पढ्नुहोस् र तपाइँले तपाइँको रेकर्डि theको गति कसरी परिवर्तन गर्ने भनेर जान्नुहुन्छ।
THM फाईलहरू र डिजिटल क्यामेरा (फोटो वा भिडियो)
THM: यदि तपाइँ तपाइँको क्यामेराबाट तपाइँको कम्प्युटरमा फाईल ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ र तपाइँ यस विस्तारमा आउनु भएको छ भने, यो पोष्ट पढ्नुहोस् "एचटीएम" एक्सटेन्सनका साथ यी फाइलहरू के हुन् भनेर पत्ता लगाउन।
इम्युलले क्रेडिटहरू कहाँ राख्छ? (दोस्रो भाग)
EMule क्रेडिट मा मिनी गाइड को दोस्रो भाग। तिनीहरू कहाँ छन्, कसरी उनीहरू पहुँच गरिन्छन्, क्रेडिटहरू के हुन् ...
युट्यूब भिडियोहरू कसरी हेर्ने
YouTube भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्न? यहाँ हामी YouTube भिडियोको साथ यस समस्यालाई कसरी ठीक गर्ने भनेर चरण-चरण वर्णन गर्दछौं।
कसरी DVD सिक्का संग एक फिल्म बर्न गर्ने
यहाँ तपाईं कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ DVD डिस्क्रिप्टनको साथ एक चलचित्र बर्णन स्टेप बाय स्टेप र सजिलैसँग स्वतन्त्र प्रोग्रामको साथ।
नीरोको साथ कसरी डाटा डिस्क जलाउने
यहाँ तपाई कसरी चरण-दर-चरण सीख्नुहुन्छ कसरी डेटा नीरोको साथ DVD DVD जलाउने र तपाईले धेरै धेरै पाठ्य सामग्रीहरू भेट्टाउनुहुनेछ।
एक नियमित DVD लाई एक डबल लेयर DVD कसरी जलाउने
यहाँ तपाईं कसरी सामान्य डीभीडी (एकल तह) मा डबल लेयर DVD बर्न गर्ने कुरा सिक्नुहुनेछ।